गोदावरी जंगलमा दुई जनाबिचको का:ण्ड बाहिरियो, पूरा भिडियो ! - jagritikhabar.com
गोदावरी जंगलमा दुई जनाबिचको का:ण्ड बाहिरियो, पूरा भिडियो !
विराटनगरको मुख्य बजार क्षेत्र महाविर रोडमा सञ्चालित जेन्टलमेन टेलर्सका सञ्चालक सद्दाम मियाँलाई प्रहरीले सिसी क्यामेराको दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो ।सिलाएका कपडा जिउमा फिटिङ्ग भए वा भएनन् भनेर सेवाग्राहीले लगाएर परीक्षण गर्न बनाइदिएको चेन्जिङ्ग रुपमा सिसी क्यामेरा जडान गरेर आफ्नो कक्षमा राखेको कम्प्यूटरमा मनिटर गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन् ।
पूरा भिडियो तल छ !
यौ”न मानव जीवनको अनिवार्य र प्राकृतिक कुरा हो। यसमा एकअर्काप्रति प्रेम, समर्पण र सन्तुष्टिको महत्व सबैभन्दा बढी हुन्छ।
यौ”न स”म्पर्क गरिरहेका बेला एक अर्कालाई भरपूर सन्तु’ष्टि दिन महिला अथवा पुरुष दुवैले धेरै मेहनत गरिरहेका हुन सक्छन्।
सरसफाइमा लाग्नु :– यौ”न सम्पर्क गनुपूर्व सँगै नुहाउनु निकै लाभदायक मानिन्छ। तर, सहवासपछि हतार गरेर वासरुमतिर लाग्नु गलत हुन्छ। स”हवास गरिरहेका बेला जोडीहरु केही खराब भएको पनि मतलब गर्दैनन्।
तर, सकिनेबित्तिकै त्यो सफा गर्नका लागि वासरुमतिर गइहाल्छन्, यो एक तरिकाले ठिकै हो। तर, तपाईंको पार्टनर त्यसपछि पनि से”क्स मुडमा नै हुनसक्ने भएर त्यसलाई लम्ब्याउने चाहना हुनसक्छ।सफा गर्नका लागि हतार गर्दा तपाईंको पार्टनरमा यौ”न सम्पर्कका दौरान केही नराम्रो घटना भयो कि भन्ने सोच आउन सक्ने भएका कारण पार्टनरको यौ”न सम्बन्धको मुड खराब हुनसक्छ।
साथीलाई फोन गर्नु :– धेरैजसो जोडीहरुले गर्ने यो अर्को साधारण गल्ती हो। यो साँचो हो कि स’हवासका बेला कोही पनि आफ्नो फोन उठाउन र कामको कुरा गर्न इच्छुक रहँदैनन्। त्यसकारण यस्तो गफका लागि किन बिहानसम्म नकुर्ने त ?
यौ”न सम्बन्धलाई अनुभव गर्ने बेलामा आफ्नो कान र आँखालाई मोबाइलमा केन्द्रित गर्ने हो भने तपाईंको पार्टनरले तपाईं यसमा इच्छुक हुनुहुन्न भन्ने सोच्नुहुनेछ, जसले यौ”न सम्पर्कको मुड खराब गर्नसक्छ।
यौ”न सम्बन्धका दौरानमा जोडीले के सोचिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा अझै पनि यकिन भन्न गाह्रै छ। यदि कसैले स’हवासपछि पढ्नका लागि तरखर गर्छ भने त्यो नै उत्तर हुनसक्छ। आफ्नो पार्टनरलाई एक्लै छोडेर आफू पढ्न अथवा बाँकी भएको काम सिध्याउनतिर लाग्नुहुन्छ भने यसले तपाईंको यौन जीवनमा न’कारात्मक असर पुर्याउँदछ।
कामका बारेमा कुरा गर्नु :– कतिपय यौ”न जोडीहरु सहवासपछि घरायसी समस्याका बारेमा कुरा गर्ने र योजना बनाउने गर्दछन्। साथै कामको तनावका बारेमा कुरा गर्न चाहन्छन्।
यसले यौ”न साथीको मनोविज्ञानमा सकारात्मक अर्थ राख्दैन। त्यसैले तनावयुक्त कुराहरु यस्तो समयमा नगर्नु नै राम्रो हुन्छ।